About me? For Next Ten Decade>>>> Once Upon A Time ………………………………., There wasaN O T H I N G.
SUMMER … STREAM ….. AND ROCK.
Invitation to Bloggers’ Seminar
ု့ko ko on Strangeness
Amumpjege on Why-do-we-blog? & Me..
may oo moe on May Oo Moe
Graifffed on Why-do-we-blog? & Me..
layma on No.3.. TideLaw
kadaung on No.3.. TideLaw
layma on SUMMER … STREAM ….. AND ROCK.
ဂျစ်တူး on SUMMER … STREAM ….. AND ROCK.
myatlone on SUMMER … STREAM ….. AND ROCK.
တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ on No.3.. TideLaw
About me? For Next Ten Decade>>>> Once Upon A Time ....................................., There wasaN O T H I N G.
Posted on October 21, 2007 by teslanet
Posted on September 23, 2007 by teslanet
အင်း… လသာပါရဲ့ တိမ်ကလာဖုံးသွားတာ
Posted on September 13, 2007 by teslanet
Posted on September 9, 2007 by teslanet
Mr.Poohးး ကိုတက်စလာ – မွေးနေ့မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ရေးဖေါ်ဖတ်ဖက် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းတယ်။ 🙂
မအိမ့်းး ပျော်ရွှင်ပါစေ.. ရေလိုမွှေး လို့ ပန်းလိုအေးပါစေ.. ဒါနဲ့ ဘယ်နှနှစ်ပြည့်တာလဲ… ၁၆နှစ်လား
ကိုAlvinးး Hay Ko Tesla… Happy Birthday! 🙂
ပုံရိပ်းး ဟေး မွေးနေ့ဆို…..။ မုန့်စားမယ်!!!! ကောင်းသောမွေးနေ့ပါ ကိုတက် 🙂
Clonegal84းး Happy Birthday bro.wish u alldbest. and may all your wishes come true soon….
ကိုနေဘုန်းလတ်းး အဲဒီ့နေ့က … ငလျင်မလှုပ်ဘူး … မိုးကြီးလဲမရွာဘူး …
နောက် … ထူးထူးခြားခြား ဘယ်လို ပန်းမျိုးမှလဲပွင့်မသွား ဘူး … ဒါပေမယ့် … အဲဒီ့နေ့မှာ တက်စလာ ဆိုတဲ့လူဖြစ်လာတယ် … ရိုးရိုးလေးပါပဲ … ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ရိုးရိုးလေး ဆိုတာကပဲ … အခုအချိန်မှာ နောက်ပိုင်းမင်းသားကြီး အဖြစ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အ၀န်းအ၀ိုင်းလေးမှာ ဆန်းဆန်းပြားပြားလေး ဖြစ်လာတယ် … … ဒီလိုပါပဲ … သာမာန်လူတွေရဲ့ သာမာန်ဖြစ်ရပ်လေးတွေနဲ့ပဲ သမိုင်းဟာ အသက်ဝင်နေခဲ့တယ် …
ကိုကြီးကျော် & ညလေးးး မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။ အသားလဲ ဒီ့ထက်တိုးလာပါစေ.. 😛
မနိုင်းနိုင်းးး Happy Birthday 🙂
ဆရာဒီဝိုင်းး စိုပြည်တဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျား…း)
ကိုနေမိုးးး ကောင်းသောမွေးနေသစ်ပါ ကိုတက်စ်လာ…..။
မမေးး Happy belated birthday ပါ တက်စ် 🙂 မွေးနေ့မှာရော နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဘလော့ဂါလောကမှာ 30+ နောက်တစ်ယောက်တိုးလာတာလဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ 😀
SilverMoonးး မွေးနေဆုတောင်းနောက်ကျနေပြီး မြန်မြန်တောင်းမှ Happy Birthdayပါနော်…
ညီလေးစေတန်းး Happy Birthday ကိုတက်ကြီးရေ… နောက်တောင်ကျသွားတယ်.. စာမေးပွဲတွေ နဲ့ရှုပ်နေတာနဲ့..
Posted on September 7, 2007 by teslanet
Posted on September 3, 2007 by teslanet
မြို့စားကြီးက ၅မိနစ်လောက်ပဲ စိတ်ကိုထိမ်းထားပြီး ပြောခဲ့ရတယ်. နောက်တော့ ပြောလိုက်တာများ ကရားရေလွတ် ဗျာ.. စီဗုံး စီဗုံး ဗုံး ဗုံး ဗုံး….. အဲ့လို အားရပါးရပြောတဲ့ နေရာရောက်တော့ ပရိတ်သတ်တွေလန့် ပြီး တွန့်တွန့်သွားတာတော့ တွေ့ရတယ်.။ 🙂
အဲ.. ဟိုးးး ဘက် တောင့်လေးနား ကပ်ပြီး စာအုပ်ကလေးကို ရင်ဘတ်ပေါ်ဖိပြီး မျက်နာငယ်လေးနဲ့ ရင်ခုန်နေရှာတဲ့ ဘာညာလေး ကိုတွေ့တော့ အဆင်များပြေပါ့မလားဟဲ့ ပေါ့လေ.. ဟိုက် ဆရာဟ.. ပြောတာများ လေးစားယူရပါတယ်.. ပီသပါပေတယ် Service + ရဲ့ ဆရာမ..။ ရှီးဖော…။
စေတန်ဂေါ့ကတော့ ပရိတ်သတ်တွေ အာရုံပိုစိုက် ရအောင် ပြောသွားပါတယ်. မြန်လို့.. 🙂 .. ပြောတာလည်း နည်းပညာ အကြောင်းဆိုတော့ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ပရိတ်သတ်များ ကျန်ခဲ့ပါတယ်.. ပရိတ်သတ်များကတော့ နားမလည်လည် လည်လည် သူပြောအပြီးမှာ လေးစားပြီး ကျန်ခဲ့တယ် ဆိုတာတော့ သိသာတယ်။ ညီလေးစေတန်ဂေါ့.. လေးစားပါတယ်။
ဟိုး အဝေးကလူတွေကလည်း အင်တာနက်ထဲကနေ LIVE ခွန်အားတွေ ပေးနေလေရဲ့…….
Posted on August 31, 2007 by teslanet
Posted on August 30, 2007 by teslanet
ထို့ကြောင့်ပင် ဘာတွေတွေးခဲ့မိသလည်း ဘာတွေရေးမိခဲ့သလည်း အခုလိုအချိန်ကြာလာတော့ စာဖတ်သူတယောက်လို ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အခုဘာတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သလည်း ရေးခဲ့တုန်းက ဘာလို့ရေးခဲ့လည်း ဘယ်လိုခံစားချက်ရှိနေခဲ့ ပါသလဲဆိုတာ (ကဲ- ရေးမှာသာရေးစမ်းပါ 🙂 ) ပို့စ်တိုင်းကို Review ပြန်လုပ်ကြည့်မိတယ်. သိပ်တော့မထူးဆန်းပါဘူး တော်တော်များများတော့ အခုထက်ထိ ကြိုက်သားဗျ ကိုယ်ရေးတာကိုး. ကိုယ်မကြိုက်လို့ ဘယ်သူကကြိုက်ဦးမှာလည်း. အမှန်တော့ ပို့စ်တခုခြင်းစီကိုတောင် ပြန်လည် စမ်းစစ်ခြင်းဆိုပြီးရေးလိုက်ချင်သေးရဲ့. အခုတော့လည်း ငါးခုပေါ့. ကျနော်ရွေးမဲ့ငါးခုကတော့ ကျနော့်တယောက်တည်း အမြင်ကပဲ ခံစားပြီးရွေးထားလိုက်တယ်. ကွန်မန့်တွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီး ခံစားဖတ်ရှူသူ တော်တော်များများ နဲ့ အကြိုက်တူတဲ့ဟာများကို တွေ့သော်လည်းမရွေးမိပါဘူး..။
ကဲကဲ.. အရှေ့ကို လျှောက်ပါလို့ အနောက်ကိုတဲ့ မျှော်လိုက်ရင်… (နေစူးလိုက်တာ 😉 )
ကျနော်တို့လိုက်မှီခြင်းများရဲ့ အလွန် မမြင်ရသေးတဲ့ လိုက်မမှီသေးတဲ့ ဟိုဘက်က ကိစ္စတွေအများကြီးရှိ နေသေးတယ်ဆိုတာကို ခံစားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အာဖရိကတောထဲက လူရိုင်းတယောက်ကို အီဖယ်မျှော်စင်ကြီး အကြောင်းပြောရင် သူယုံခြင်မှယုံပါလိမ့်မယ် အဲ့လိုပါပဲ ကျနော်တို့ထိမိနေ တွေ့မိနေသေးတဲ့ အရာတွေဟာ စကြာဝဠာကြီးနဲ့ နိုင်းယှဉ်ရင် ဘာမှမဟုတ်သေးပဲ မရောက်ဘူးသေးတဲ့ နေရာတွေ မသိသေးတဲ့ကိစ္စတွေဟာ ပြောမဆုံးအောင် ရှိနေသေးကြောင်း ထိုနေရာတွေကို အရောက်သွားဘို့ သိပွံပညာဟာ ပို့ပေးနိုင်ပါ့မလား ဘယ်လိုပါဝါမျိုးနဲ့ သွားမှသိနိုင်မှာလည်း ဆိုသော…
Posted on August 19, 2007 by teslanet
Posted on August 16, 2007 by teslanet
သေခါနီး.. အဲလေ.. သာယာရွှေပြည်ကြီး နဲ့ပါခင်ဗျား…။